တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၀၀ ကျော် သေဆုံးပြီးဖြစ်
အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၂ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့လို့ ရဲမှူးချုပ် တစ်ယောက် သေဆုံး ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ရဲဝန်ထမ်း ၅ယောက်လည်း ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ကိုင်ရို တက္ကသိုလ် က အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ် ဌာန ဘက်မှာ အဓိကရုဏ်း ထိန်းသိမ်းတဲ့ ရဲတွေကို ရည်ရွယ်တဲ့ လမ်းဘေး ဗုံး ၂လုံး နဲ့ တိုက်ခိုက်တာ လို့ အီဂျစ် လုံခြုံရေး အရာရှိတွေ က ပြောပါတယ်။
အရင် သမ္မတ မော်စီ ကို စစ်တပ်က ဖြုတ်ချပြီးတဲ့နောက် မွတ်ဆလင် ညီအစ်ကိုများ အဖွဲ့ကို ထောက်ခံတဲ့ အဲဒီ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေနဲ့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကြား အမြဲလို တိုက်ခိုက်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စစ်တပ်က သမ္မတကို ဖြုတ်ချ ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုလို တိုက်ခိုက် တာတွေကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင် ညီအစ်ကိုများ အဖွဲ့ကတော့ ဒါတွေဟာ သူတို့လက်ချက် မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းထားပါတယ်။
ရုရှား နိုင်ငံ မော်စကို မြို့မှာ နှစ် အနည်းငယ် အတွင်း နာမည်ကြီး လာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခု ကတော့ စွန့်စွန့်စားစား ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာ မြင်တွေ့ ရသလိုပါပဲ။
သူကတော့ Kirill Oreshkin လို့အမည်ရတဲ့ မော်စကိုက လူငယ် ဓာတ်ပုံ ဆရာ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး သူ့လိုပဲ သူ့ထက် ငါ အပြိုင် ပိုမြင့်တဲ့ နေရာကို တက်လို့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်နေတာတွေလည်း အများအပြား ရှိပါတယ်။ အပေါ်တက်ရန် ခွင့်မပြုပဲ တားဆီး ထားတဲ့ တာဝါတွေ၊ ကျောက်တိုင်တွေ၊ အမှတ် အသား လက္ခဏာတွေ ပေါ်ကို တတ်လို့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး ကိုယ့်ပုံ ကိုရိုက် Selfie မှတ်တမ်း ကို Kirill ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ အပေါ်တက်တဲ့ အခါမှာလည်း ဘာ ခါးပတ်ကြိုးနဲ့ သက်ကယ် ကြိုးမှ မပါ ပါဘူး။
သူ့လိုမျိုး စွန့်စားမှုများကို ရုရှားမှာတင် မက ဥရောပ နိုင်ငံများက တားမြစ် ထားကြောင်း သိရ ပါတယ်။
ဆွမ်ဆီးကို (၃)ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့် ပွဲစဉ်တွင် လိုက်ပါအားပေးခဲ့သည့် ပရိသတ်များကို တောင်းပန်သည့်အနေဖြင့် ဖူလ်ဟမ်နှင့် ကစားမည့်ပွဲတွင် လက်မှတ်ခ စိုက်ပေးရန် နောဝစ်ခ်ျ အသင်းသားများ စီစဉ်ထားသည်ဟု ဒုတိယ အသင်းခေါင်းဆောင် ရက်ဆယ်မာတင်က ပြောသည်။ နောဝစ်ခ်ျမှာ ဆွမ်ဆီးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် အဆင့်(၁၈)နေရာမှ ကာဒစ်ဖ်နှင့် (၆)မှတ်သာ ကွာဟပြီး အဆင့်(၁၅)နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဆွမ်ဆီးနှင့်ပွဲတွင် နောဝစ်ခ်ျအသင်းကို လိုက်ပါအားပေးသည့် ပရိသတ် ၈၉၉ဦး ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ လက်မှတ်ခများကို ပြန်လည်ပေးချေသည့် အနေဖြင့် ဖူလ်ဟမ်နှင့်ပွဲတွင် လက်မှတ်ခပေးရန် မလိုဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် နောဝစ်ခ်ျအသင်းသားများက စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
လေယာဉ်ပျောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ သက်သေ မတွေ့ရသေး
လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် ၃ ပတ်က ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့တဲ့ မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်း MH 370 ပေါ်မှာ ပါသွားတဲ့ ခရီးသည် အားလုံးကို သံသယရှိသူ စာရင်းက ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီလို့ မလေးရှား ရဲချုပ်က ပြောပါတယ်။
ရဲချုပ် ခါလစ်အဘူ ဘက်ကာက ခရီးသည် ၂၂၇ ဦး ထဲမှာ လေယာဉ် ပြန်ပေးဆွဲမယ့်သူ၊ ဖျက်ဆီး တိုက်ခိုက်မယ့်သူတွေ တစ်ယောက်မှ မပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
လေယာဉ်က လမ်းကြောင်း ဘာလို့ ပြောင်းသွားခဲ့လဲ၊ မရိုးမသား ကြံစည်မှုတွေ ရှိခဲ့လား ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ လေယာဉ် အမှုထမ်းတွေ အထူးသဖြင့် လေယာဉ်မှူးတွေကို အာရုံစိုက်ပြီး ဆက်လက် စုံစမ်း စစ်ဆေးနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ မလေးရှားရဲချုပ်က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၇ ယောက် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး၊ ၂၀ ဒဏ်ရာ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၇ ယောက် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားပြီး ၂၀ ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ဘန်ကောက် အီရာဝန် ဆေးဌာနက ပြောပါတယ်။
မျက်မြင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ဗုံးကို ဘန်ခန်မြို့နယ်၊ လတ်ပလာခွာ လမ်း အမှတ် ၇၁ မှ ရှိတဲ့ မှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းဟောင်းတွေ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ ဂိုဒေါင်မှာ ထားရင်း ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗုံးကို ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ချီစက်မောင်းတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားတယောက်က မြေတူးရင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဂိုဒေါင်က ၀ယ်ယူသွားတာပါ၊ ဗုံးပေါက်မှုကြောင့် ဂိုဒေါင်မှာ မီးလောင်သွားပြီး အနီးအနားက အိမ်တွေ ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်၊ ပေါက်ကွဲမှုအရှိန်ကြောင့် အနက် သုံးမီတာ၊ အကျယ် ၈ မီတာ ရှိတဲ့ တွင်းကြီး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားတွေက ဗုံးကို အပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားအောင် ခွဲဖို့ တိုက်တွန်းရာကနေ အခုလို ပေါက်ကွဲသွားတာပါ။
ဆရာဝန်လုပ်သက်ရလာတဲ့အချိန်မှာ အမှတ်မထင် သတိပြုမိလာတာလေးတွေရှိတယ်။ (ဂျွန်းဒစ်) လို့ခေါ်တဲ့ အသားဝါ ရောဂါ လူနာတွေ လာရင် သူတို့ ဝတ်လာတဲ့အဝတ်အစားက လူနာ ၅ ယောက်မှာ ၃ ယောက်က အဝါရောင် အဝတ်ကို ဝတ်စားလာတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အသားဝါက ပေါမှပေါ။ ရီစရာသဘောလဲ ပြောမိတယ်။ ဆနွင်းမှုံ့မစားနဲ့ လို့။
အသဲရောင်စေသည့် (ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုး ၆ မျိုးရှိသည်။ A, B, C, D, E, G တို့ဖြစ်ကြသည်။ (ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုးမှ ကူးသည့် အခြား ရောဂါများမှာ အအေးမိခြင်း၊ ခွေးရူးပြန်ခြင်း၊ အချို့သော ကင်ဆာရောဂါများ၊ ဦးနှောက် အမြှေးပါး ရောင်ခြင်း၊ ရေယုံ၊ ဝက်သက်ရောဂါ၊ တုပ်ကွေး၊ ရေကြောက် တို့ဖြစ်ကြသည်။ အဝတ်အစားနဲ့မဆိုင်ပါ။
• အစာထဲက အဆီ၊ ဆီတို့ကို အစာခြေပေးသည်၊
• အား (အင်နာဂျီ) ကို သိုလှောင်ထားသည်၊
• အဆိပ်အတောက်ကို ဖယ်ရှားပစ်သည်၊
• (ဘိုင်းလ်) အစာခြေရည် ထုတ်ပေးသည်၊
• ကိုလက်စထရော၊ သွေးခဲစေသည့် ပစ္စည်းများ၊ ပရိုတင်းများ ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
• အသား (မျက်လုံး၊ လက်သည်း၊ အရေပြား၊ ဆီး) ဝါခြင်း၊
• အသဲနေရာက နာခြင်း၊
• LFT အသဲလုပ်ငန်းများအား စစ်သောအခါ (ဘီလီရူဗင်) များနေမည်။
• (အစားအစာ) တို့ကို ပွက်အောင်ပြုတ်၊ ကျော်၊ ပေါင်း၊ ချက်ထားသည့်အစာကို ပူနွေးနေစဉ် စားပါ။ ချက်ပြုတ်ပြီးပါက ယင်ကောင် မနားစေရန် ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ယင်ကောင်၏ ခြေထောက်၌ ပိုးကပ်ပါလာနိုင်သည်။ အပြင်းစာ၊ အပြင်ဆိုင်က ရောင်းသည့် အစာများကို သန့်-မသန့် စစ်ဆေးပြီးမှ စားပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် မစားပါနှင့်။ ရောဂါရှိသူ ချက်ပြုတ်ကျော်လှော် ဆေးကြောသည်မှ ကူးစက်နိုင်သည်။ ဆနွင်းမှုံ့နဲ့မဆိုင်ပါ။
• ဝါတာမလျော့ရင် Drip သွင်းပါ။
• အသဲအားဆေး သောက်ပါ၊ ထိုးပါ၊ (ဆေးကို နောက်ဆုံးမှာရေးတာက အထက်ကလုပ်စရာတွေကို ပိုပြီး အားကိုးစေဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။)
လူကို သစ်ပင်ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါ တကယ်ရှိပါတယ်။ သစ်ပင်ဖြစ်စေတယ် ဆိုတာထက် သစ်မြစ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် ပိုမှန်မယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးကနေ သစ်ပင်ကဲ့သို့ အမြစ်အသားပိုများ အဆမတန်တိုးပွား လာခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ကာဆီနိုဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်များ သွေးနဲ့ တစ်ရှူးမှာ အဆမတန်တိုးပွားလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Carcinoma ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ရောဂါလို့လည်း တစ်မျိုးခေါ်ပါတယ်။ နာမည်အရှည်ခေါ် လိုက်တော့ Epidermodysplasia verruciformis လို့ အမည်ရ ပါတယ်။
ဒါက ပုံသေပြောလို့မရပါဘူး။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုမရှိ ရင် သွေးဆဲလ်ကနေ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်မယ့် တစ်ရှူးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်စေ မယ့် ဘယ်သူကမှ သစ်ပင်ဖြစ်မသွားပါဘူး။ ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်သွားသူများ ကတော့ မွေးရာပါ ကင်ဆာဆဲလ်ပါတယ်လို့ ဆိုရမလားပါပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အသားပိုတုံးလေး သေးသေးလေး ရှိရာကနေ အသက်ကြီးတော့ အတုံးကြီးအထိ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး လူကို လမ်းလျှောက်လို့မရတော့အောင်ကို တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။
ကုသမှု အတွက် အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်နဲ့ ဂျပန်မှ ပညာရှင်များ ကြိုးစားရှာဖွေပါတယ်။ အကောင်းဆုံး အဖြေကိုရှာဖွေ ပေးလာနိုင်သူ ကတော့ ဂျပန် ဖြစ်ပြီး သစ်မြစ်လို တစ်ကိုယ်လုံး ဖုံးလွမ်းနိုင်မယ့် အသားပိုတွေကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ ဆေးကောင်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်တော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယခင် ဖြစ်ပွားတဲ့ သူ ၂ ဦးကို ဒီလိုပဲ ခွဲစိတ်လိုက်၊ ဖြတ်ပေးလိုက် လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ပြန်ပြန်ပွားလာတော့ နှစ်အနည်းငယ်ကြာရင် အရင် အတိုင်း ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုမှ ဆက်မထိန်းထားနိုင်ရင် ထင်တာ ထက်တောင် ပိုများနိုင်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားက သစ်ပင်လူသားဆိုရင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ခွဲထုတ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်တော့ အရင် လို ပြန်ပွားလာတာပါပဲ။
ဆိုးကျိုးကတော့ သေတဲ့အထိပါပဲ။ အမြစ်က အပြင်မှာ တက်နေရုံမကတော့ ပဲ အသားအတွင်းထိပါ တွယ်စေပါတယ်။ ဒီတော့ သွေးလည်ပတ်မှု လမ်းကြောင်းတွေကိုက အစ အသားပိုများနဲ့ ဖုံးဖိစေပြီး နောက်ဆုံး သေတဲ့ အထိတောင် ဖြစ်စေပါတယ်။ အသားပိုဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်က မလိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့အပြင် ဖယ်တောင်ထုတ်သင့်ပါတယ်။ သူက ဘာအကျိုးမှ မပေးတဲ့အပြင် သွေးဆဲလ်နဲ့ တစ်ရှူးတွေကိုတောင် အနှောက်အယှက်ပေးပါတယ်။ မျိုးပွားမှုနှုန်းမြန်ပြီး နောက်ဆုံး တစ်ကိုယ်လုံး ကို သစ်မြစ်လို ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါသည် နှစ်ဦးတော့ လူသိများပါတယ်။ ရိုမေနီးယားနိုင်ငံက သစ်ပင် လူသားကိုမတ်လ ၂၀၀၇ က လူသိများလာပြီး အင်ဒိုနီးရှားက သစ်ပင် လူသား ကိုတော့ ၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာလက စလို့ လူသိများသွားပါတယ်။ ပုံမှာ ပြသထားတဲ့ သူကတော့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံက သစ်ပင်လူသား ဖြစ် ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ လမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်၊ တစ်ချိန်လုံးလည်း နာကျင်နေလို့ ထုံဆေးနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့အထိကို ဆိုးခဲ့ပါတယ်။ အသားပိုမို့ ဓားနဲ့သွားဖြတ်လို့တောင်မရပါဘူး။ ခံစားမှုအာရုံကြောများနဲ့လည်းဆက် စပ်နေပြီး သူ့ကိုထိရင် အသားထိသလိုပဲ နာကျင်ခံစား ရပါတယ်။ ဖြတ်မိ ၊တောက်မိရင်သွေးထွက်ပြီး သေလုမတတ် နာကျင်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါမျိုးကို ပြန်ခွဲရင်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ သစ်ပင် လူသားဖြစ်သွားတဲ့ အသားပိုဖုံး ရောဂါကလည်း ကင်ဆာ တစ်မျိုးပါပဲ။ ကိုယ်တွင်းမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပြင်ပ အသားပိုတိုးစေတဲ့ ကင်ဆာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရောဂါက ရှားပါးတယ်ဆိုပေမယ့် သတိထားရမယ့် အရာ ဖြစ် ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆို ဝဋ်ကြွေး တစ်ခုပါပဲ။ သစ်ပင်လူသားများ အတွက် ဖြေဆေးကို ရှာဖွေနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဦးဝင်းတင် ကျန်းမာရေး အမြန်ဆုံး ကောင်းလာဖို့ လူငယ် ၃ဝ ခန့် ရွှေတိဂုံမှာ ဆုတောင်း (ရုပ်/သံ)
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်၊ နေ့လည် ၁၂ နာရီ သတင်းစာဆရာကြီး အဘဦးဝင်းတင်၏ အခြေအနေမှာ ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းတွင် သွေးဝမ်းသွားမှုကို အကြောင်းပြုလျက် စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေကြောင်းသိရှိရသည်။
သမားတော်ကြီးများပါဝင်သော အဖွဲ့မှ အနီးကပ်ကြပ်မတ်ကုသလျက်ရှိပြီး၊ သွေးထွက်သည့်
အကြောင်းအရင်းကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။ သွေးမှာ fresh blood ဖြစ်ပြီး၊ သွေးပေါင်ချိန်
နှင့် သွေးခုန်နှုန်းမှာ ကောင်းမွန်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၊ အမျိုးသားသွေးလှူဘဏ်အနေဖြင့်၊လိုအပ်ပါက သွေးသွင်းကုသနိုင်ရန်
အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။သွေးဝမ်းဓာတ်ခွဲစစ်ဆေး မှုကို အရေးပေါ်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ သွေးထွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်းကို ရှာဖွေနေဆဲ
ညနေပိုင်းတွင်အဘဦးဝင်းတင်ကို သွေးသွင်းကုသပေးလျက်ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ နာယကကြီး ဦးတင်ဦး ထပ်မံလာရောက် သတင်းမေး၊ အားပေးခဲ့သည်။
သမားတော်ကြီးများ၊ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ နှင့် ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် အစွမ်းကုန်
ကြိုးစားကုသပေးလျက်ရှိသည်။ ၀ိုင်းဝန်းဆုတောင်းကြရန် ဆော်သြလိုပါသည်။
သမီးလေးရွာသားများကို ရှေ့ဆက်သွားခွင့်မပြုဟု ကရင်ပြည်နယ် နယ်/လုံဝန်ကြီး အမိန့်ထုတ်
ကေဇူး ရန်ကုန်(မဇ္ဈိမ)။ ။
DKBA နှင့် လိုက်ပါသွားသော သမီးကလေးကျေးရွာ သားများကို မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ခရိုင်ချင်းဆက်သွယ်သော
တံတားတွင် ကရင်ပြည်နယ် အစိုးအဖွဲ့က
တားဆီးလိုက်ပြီးနောက် ဆက်လက်သွားခွင့်မပြုကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်၊ နယ်စပ်ရေးရာနှင့်လုံခြုံရေးဝန်ကြီးက အမိန့်ထုတ်လိုက်သည်ဟု ယင်းအဖွဲ့နှင့်လိုက်ပါသွားသည့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့မှ ဦးအောင်လွင်ကပြောသည်။
“ရွာသားတွေကတော့ ဆက်မသွားရဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ စုဝေးပြီးထိုင်နေကြတယ်” ဟု ညနေ ၃နာရီ ၅၀မိနစ်က မဇ္ဈိမ၏ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကို ဦးအောင်လွင်က ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
DKBA နှင့်လိုက်ပါသွားသော သမီးကလေးကျေးရွာမှ ရွာသားအရေအတွက်မှာ လူပေါင်း ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ
လိုက်ပါပို့ဆောင်သူ ၁၀၀ ဦးခန့်ရှိသည်။
ရွာဖျက်ခံခဲ့ရသည့် သမီးကလေးရွာသားများမှာ DKBA ၏ ဖိတ်ဖေါ်မှုအရ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဆုံဆည်းမြိုင်ရွာသို့ လိုက်ပါသွားစဉ် ယခုကဲ့သို့ တားဆီးခံရခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ သမီးကလေးရွာကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၄ ရက်က ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့်အတွက် ရွာသူရွာသားများ နေစရာကင်းမဲ့နေသည်။
Photo From Thet Khaing & Coko Dmoe
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့်ထိန်းချုပ်ထားသော လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချမှုကို ဂျပန်က ပထမဆုံး ဖြေလျှော့မည်
တိုကျို ၊ ဧပြီ ၁
ဂျပန်နိုင်ငံက နှစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့် ထိန်းချုပ်ထားသော လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချမှုများကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြေလျှော့တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး အမေရိကန် ဦးဆောင် ရေးဆွဲပေးခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ မိမိနိုင်ငံကို ကာကွယ်သည့် အခြေအနေမှအပ စစ်မက်ဖြစ်ပွားခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။
ထို့ပြင် ဂျပန်နည်းပညာများကို အမေရိကသို့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းများ ရှိသော်လည်း စစ်လက်နက် တင်ပို့ရောင်းချခြင်းကိုမူ တားမြစ်ထားသည်။
ယခုပြင်ဆင်ရေးဆွဲမည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ဂျပန်၏ မဟာမိတ် နိုင်ငံများနှင့် လက်နက်များ ပူးတွဲထုတ်လုပ်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ ဂျပန်၏ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း များကိုလည်း ဈေးကွက်သစ်များ၊ နည်းပညာ အသစ်များကို လက်ခံရယူနိုင်ခွင့်ကိုလည်း ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်သည်။
ဂျပန်သည် လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကွန်မြူနစ် နိုင်ငံများ၊ ကုလသမဂ္ဂက လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချခြင်းမှ ပိတ်ပင်ခံထားရသည့် နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခများတွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ပါဝင်ရန် အလားအလာရှိသော နိုင်ငံများသို့ လက်နက် ရောင်းချမှု မပြုခြင်းဟူသော မူသုံးချက်ပေါ်တွင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်တည်ခဲ့သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ဂျပန်သည် အဆိုပါ မူသုံးချက်သည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လက်နက် တင်ပို့မှုကို မိမိသဘောထားဖြင့် ပိတ်ပင် တားမြစ်မှု ပြုလုပ်ထားခဲ့သည်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးသည် ဂျပန်အမျိုးသား လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး မိမိသဘောဖြင့် ချမှတ်ထားသော တားဆီး ပိတ်ပင်မှုများကို ပြန်လည် လျှော့ချရန် လိုလားလျက်ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖြစ်ထွန်းစေသော အရေးကိစ္စများနှင့် ဂျပန်လုံခြုံရေး အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာသည့် အခြေအနေများတွင် လက်နက် တင်ပို့ရောင်းချမှုကို ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် Kyodo သတင်း အေဂျင်စီတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဂျပန်က လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ထိန်းချုပ်မှုများကို ဖြေလျှော့ရာတွင် လက်နက် တင်ပို့မှုများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံက တင်ပို့ရောင်းချသော လက်နက်များကို တတိယအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နိုင်ငံကို ထပ်မံရောင်းချခွင့်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း အဆိုပါ သတင်း အေဂျင်စီက ပြောကြားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံက ယခုကဲ့သို့ လက်နက် တင်ပို့ရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ဖြေလျှော့မည့် ကိစ္စအပေါ် တရုတ်ကသံသယဖြင့် ရှုမြင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရေးသည် အမျိုးသားရေးဝါဒီ လက်ယာယိမ်းများဘက်သို့ ရောက်ရှိ သွားပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ လက်နက် တင်ပို့ခြင်းအပေါ် ထိန်းချုပ် ထားမှုများကို ဖြေလျှော့ ပေးလိုက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကျိုးဆက်သည် လူအများအတွက် စိုးရိမ်စရာကိစ္စ ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဟွာချွန်ရင်းက ပြောကြားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည် ယမန်နှစ်ကလည်း အမျိုးသားလုံခြုံရေး မဟာဗျူဟာသစ်ကို လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်ခြင်းကို လည်းကောင်း ဂျပန် အစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
ယင်းလုပ်ရပ်သည် တရုတ်၏ စစ်အင်အား ကြီးထွားမှုကို တန်ပြန်ရန် ရည်ရွယ်သည့် လုပ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ခံခဲ့ရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည် လာမည့် ငါးနှစ်အတွင်း မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် များ၊ ရေဒါပျောက် တိုက်လေယာဉ်များနှင့် ကမ်းတက် စစ်ရေယာဉ်များကို ဝယ်ယူမည် ဖြစ်သည်
မော်တော်ယာဉ်အို ယာဉ်ဟောင်း အပ်နှံခွင့်ပြုသည့် စနစ်အရ ဧပြီလအတွင်း သက်တမ်းနှစ် ၂၀ ကျော်လွန်မည့် ‘၁က’ အက္ခရာ မော်တော်ယာဉ်များကို ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့မှ စတင်အပ်နှံခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။
‘၂က’ အက္ခရာ များကိုလည်း အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့မှစတင်၍ အပ်နှံခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
‘အ’ အက္ခရာများကို အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှ စတင်အပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ခြောက်လခန့် ကြာမြင့်ခဲ့သော်လည်း နံပါတ်အားလုံး ကုန်ဆုံးသည်အထိ လာရောက် အပ်နှံခြင်း မရှိသေးကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ‘အ’ အက္ခရာများမှာ အပ်နှံရန် အစီးရေ ၈၆၁၈ စီးရှိပြီး မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ထိ လာရောက် အပ်နှံထားသော အစီးရေမှာ ၇၂၄၇ စီးရှိကာ ၁၃၇၁ စီး အပ်နှံရန် ကျန်ရှိကြောင်း ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း ဌာန၏ စာရင်းဇယားများအရ သိရသည်။
လတ်တလော မော်တော်ယာဉ် ဈေးကွက်အတွင်း ‘အ’ အက္ခရာ မော်တော်ယာဉ်များ ကုန်ဆုံးလုနီး ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် စလစ်ဈေးများ မြင့်တက်လျက် ရှိပြီး စလစ်ဖျက်သိမ်းမည်ဆိုသော သတင်းများကြောင့်လည်း စလစ်ဈေးနှုန်း များမှာ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေကြောင်း မော်တော်ယာဉ် ဈေးကွက် အတွင်းထံမှ သိရသည်။
အက္ခရာအသစ်များ ထပ်မံလက်ခံပါက စလစ်ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းစေမည် ဖြစ်ပြီး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဝန်းကျင်အထိ ပြန်လည် ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း မော်တော်ယာဉ် ရောင်းဝယ်သူအချို့က ပြောဆိုသည်။
“အမှန်တကယ်က သက်တမ်းပြည့်မှ အပ်နှံရတာကိုက မဟုတ်တာပါ။ တိုက်သွားတဲ့ ကားတို့၊ ပိုင်ရှင်က မော်ဒယ်လ် နိမ့်နေလို့ မစီးချင်တော့တဲ့ ကားတို့ကိုလည်း အပ်နှံခွင့် ပြုသင့်ပါတယ်” ဟု Farmer Auto မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက ပြောကြားသည်။
ကုမ္ပဏီများအ စုဖွဲ.လိုက်လည်ပတ်မှုအများဆုံးချိန်
ခရီးသွားယာဉ်များထွက်ခြင်း၊ဈေးနှုန်းမှာ အသွားအပြန်
ရန်ကုန်မှ၎နာရီသာကြာမြင့်ခြင်းစသည့်အချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
အလွန်ဆိုးရွားစွာဧည့်သည်များအပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ်နေပါသည်။
သဖြင့်စနေနေ. သွားကြရန်ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ရင်ပြင် တော်ပေါ်တွင်ရှိသော "တိဿ ဆောင်"တည်းခိုခန်းတွင်သွားလာရေးလွယ်ကူရန်ရွေးပါသည်
ယူရန်ကျွန်တော့်ယောက်ဖမှဆုံးဖြတ်ပြီး reception သို.လာကြပါသည်။
။ရန်ကုန်တွင် star မရသောအခန်း၁၆ခန်းခန်. ဟိုတယ်ဖွင့်ရန်မြေငှားရမ်းခမှာတစ်လသိန်း၅၀ခန်.ရှိပါသည်
၊နိုင်ငံခြားသား U$70 ၀န်းကျင်သာယူပါသည်။အဲကွန်း၊ရေပူရေအေး၊ TV၊စားပွဲ၊ကုလားထိုင်၊ရေခဲသေတ္တာ၊ဗွီဒိုပါပါသည်။အနည်းဆုံး၁၂ပေ
ဖန်ခွက်ပေးပါသည်။၀န်ထမ်းများမှာသင်တန်းဆင်း skilled workers များဖြစ်ပါသည်။တိဿဆောင်တွင်ကျွန်တော့်အထင်အခန်း၄၀ကျော်ပါမည်။
A, B,C,Dဟုခွဲထားပြီးကျွန်တော်တို. တည်းသော
တစ်ခန်းကို၁သိန်းတောင်းပါသည်။ foreigner U$120 ဖြစ်ပါသည်။ကျိုက်ထိုဟိုတယ်နှင့် Mountain Top တွင်
ကျွန်တော်အဖြစ်မှန်ကိုတင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပြီးမည်သူ.ကိုမှ ဘက် မလိုက်ပါ။။တစ်ခြားဘာဆောင်ညာဆောင်တွင်တည်းနေသူများကို
သမိုင်းဝန်ကျီးကန်းပါးစပ်စေတီတော်နှင့်လှိုဏ်ဂူတော်သို. လို. နဖူးစီးရေးထားပါသည်။နောက်ဆုံးစာလုံး "သို. "မှာကွယ်သလိုဖြစ်နေသဖြင့်ကျီးကန်းပါးစပ်ရောက်ပြီဟုထင်စရာရှိပါသည်။
customer များကိုနောက်မှတန်းစီခိုင်းပြီးရန်လုပ်ပါသည်။ "ငါတို.ကလေလံဖိုးပေးပြီးလုပ်စားနေတာ" တဲ့။
ဗွီနိုင်းများဖြင့်မည်သည့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ. အစည်း၊လူမှုရေးအဖွဲ. အစည်းနှင့်ပတ်သက်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များမှစည်းရုံးခြင်း၊
ဘဏ္ဏာတော်ထိန်းရဲ. ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်လို. ရေးထားပါသည်၊
နိဂုံးအနေဖြင့်ပြောလိုသည်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားများသည် complain တက်ရမည်ကိုအလွန်ဝန်လေးသည်။ Review ရေးကျင့်မရှိပါ
Credit to Pytha Poe .
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ဟန်းဆက်ကိုင်ဆောင် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ရေဝင်ခြင်း၊ ရေစိုခြင်းများဖြစ်လာပါက မည်သည့် Touch စနစ်အမျိုးအစား ဟန်းဆက်မဆို ဘက်ထရီ ချက်ချင်းဖြုတ်ထားသင့်ကြောင်း ဆားဗစ်ပညာရှင်တချို့ မှ အကြံပြုပြောကြားသည်။
“ရေစိုခံ အိတ်သုံးထားရက်နဲ့ ရေဝင်တယ်ဆိုရင် ဟန်းဆက်ကို ဘက်ထရီ ချက်ချင်းဖြုတ်ထားတာ အကောင်းဆုံးကာကွယ်တာပါပဲ။ ဖြုတ်လို့ရတဲ့ SIM ကတ်တို့၊ မက်မိုရီကတ်တို့ကအစ အရင်ဖြုတ်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ တချို့ဘက်ထရီ ဖြုတ်လို့မရတဲ့ ဟန်းဆက်တွေဆိုရင်တော့ စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုး မလုပ်ဘဲ နီးစပ်ရာဆားဗစ်ဆိုင်ကို အမြန်ပို့တာက ပိုပြီးစိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဟန်းဆက်ကို ဒီအတိုင်း ပါဝါပိတ်ထားလို့ရှိရင် အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ တချို့က ထင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟန်းဆက်ရဲ့ ဆားကစ်ပြားကို တိုင်းကြည့်ရင် Volts တွေ ရှိနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဘက်ထရီဖြုတ်လို့ရလို့ ဖြုတ်ထားလိုက်ရင် ဆိုင်မှာသွားပြင်တဲ့အခါ ပြန်ကောင်းဖို့ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များပါမယ်” ဟု Techvilla မှ ဆားဗစ်ပညာရှင်တစ်ဦးက အကြံပြုပြောကြားသည်။
“တချို့က ဟန်းဆက်ရေဝင်ရင် ဆန်အိုးထဲ ထည့်တာတို့၊ ဆံပင် အခြောက်ခံစက် (Hair Dryer) နဲ့ ဒီအတိုင်းမှုတ်တာတို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လျှောက်လုပ်ကြတော့ နောက်မှပိုပျက်ပြီး ဆိုင်လာပြင်တာတွေ ပိုတွေ့ရတတ်တယ်။ ဆန်အိုးထဲထည့်လို့ မျက်စိအမြင်မှာ စကရင်မှာ ရေမရှိတော့ပေမဲ့ ဆန်မှာပါဝင်တဲ့ အမှုန့်လေးတွေက ရေနဲ့ရောပြီး ဆားကစ်မှာ ရွံ့ကပ်သလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီး ဟန်းဆက်ဆားကစ် ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ တချို့က ဟန်းဆက်ကို ဒီအတိုင်း ဘက်ထရီလေးဖြုတ်ပြီး Dryer နဲ့ မှုတ်တာမျိုးတွေကြောင့် Touch နဲ့ Display ထိတောင် ပျက်စီးတတ်ပါတယ်” ဟု ဆားဗစ်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမျိုးကပြောသည်။
“ရာသီဥတုက တော်တော်လေးပူနေတော့ တချို့ဆို ဟန်းဆက်ရေစို/ ရေဝင်လို့ နေပူထုတ်လှမ်းရာကနေ အပူချိန်များပြီး Touch Display တောင် ကြောင်သွားတတ်တာမျိုးလည်း မနှစ်က သင်္ကြန်မှာဖြစ်ကြတာတွေ ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေစိုခံအိတ်ထည့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း စိတ်ချလို့ မရဘူး။ ရေစိုခံအိတ်အပြင်ဘက်မှာ ရေစိုနေပြီးတော့ အပူချိန်အရမ်းများရင် ရေငွေ့ပျံပြီး အိတ်အတွင်းဘက်ကို ရေခိုးရေငွေ့အဖြစ်ပြောင်းပြီး ဝင်သွားတတ်တာကြောင့် ရေစိုခံအိတ်အပြင်ဘက်ကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြီး ရေစင်အောင် မကြာခဏ ပြုလုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါမယ်” ဟု TECHVILLA မှ ဆားဗစ်ပညာရှင်က ထပ်မံအကြံပြု ပြောကြားသည်။
ယခင်နှစ်သင်္ကြန် ကာလပြီးဆုံးသွားတိုင်း ဆားဗစ်ဆိုင်များသို့ ဖုန်းဟန်းဆက်အများအပြား ရေဝင်ခြင်းကြောင့် ရောက်လာခဲ့ကြပြီး အချို့မှာမူ ကိုယ်တိုင်နားမလည်ဘဲ စမ်းသပ်ပြုပြင်ခြင်းများကြောင့် လုံးဝပျက်စီးသွားကာ သုံးမရတော့သော အခြေအနေ ရောက်သွားသော ဟန်းဆက်အချို့များပင် ရှိခဲ့ကြောင်း မန်းမိုဘိုင်း ဆားဗစ်သမားထံမှ သိရှိရသည်။ သင်္ကြန်ကာလ ဟန်းဆက်များ ပြင်ပယူဆောင် အသုံးပြုလိုသူများအနေဖြင့် အထူးသတိပြုရန် လိုအပ်ပြီး ရေဝင်လာပါက ကြားဖူးနားဝလက်တွေ့စမ်းသပ် ပြုပြင်ခြင်းများ ရှောင်ရှားသင့်ပြီး အနည်းဆုံး ဟန်းဆက်ဘက်ထရီ၊ ဆင်းကတ်၊ SD ကတ်များကို အစောတလျင် ဖြုတ်ထားသင့်ကာ နားလည်သူများဖြင့် အမြန်ဆုံးပြုပြင်သင့်ကြောင်း ဆားဗစ်ဆရာတချို့မှ အကြံပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ့ရွှေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အများပိုင် ကုမ္ပဏီက အလေးချိန်ပိုများသည့် ၅၀ ဂရမ်၊ ၁၀၀ ဂရမ်၊ ၂၀၀ ဂရမ် ရွှေပြားများ ထုတ်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီမှ အုပ်ချူပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ရွှေပြားများ ဈေးကွက်အတွင်း ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိနိုင်ရန် ရွှေပြားထုတ် စက်သစ်များကို ပြည်ပမှ မှာယူထားကြောင်း မြန်မာ့ရွှေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီထံမှ သိရသည်။
“၁၀၀ ဂရမ်တို့၊ ၂၀၀ ဂရမ်တို့ လုပ်ဖို့အတွက် ခုချိန်က ကုန်ကြမ်းရှားနေသေးလို့ ကုန်ကြမ်းပေါတဲ့ အချိန်လောက် ကျမှထုတ်ဖို့။ ကြိုတင်ရအောင် ခုကတည်းက ပြည်ပကနေ ရွှေထုတ်လုပ်တဲ့စက်တွေ မှာထားပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လက်ရှိ ထုတ်လုပ်နေသည့် ၂ ဒသမ ၅ ဂရမ်နှင့် ၅ ဂရမ် ရွှေပြားများအတွက် ကုန်ကြမ်းကို ပြည်တွင်း အခေါက်ရွှေဈေးကွက် အတွင်းမှ ဝယ်ယူ စုဆောင်းပြီး ၉၉ ဒသမ ၉၉ နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေး ပြည့်မီသည့် ရွှေပြားပြုလုပ်ကာ ပြန်လည် ရောင်းချနေကြောင်း ၎င်းတို့၏ အဆိုအရ သိရသည်။
ယင်းဂရမ်ပြားများကို တစ်နေ့ အပြား ၄၀၀ ထိ ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချနေပြီး မေလတွင် ကိုယ်စားလှယ်များ ခန့်အပ်ကာ ဈေးကွက် ထပ်မံတိုးချဲ့သွားမည်ဟု အဆိုပါ အများပိုင်ကုမ္ပဏီက ကြေညာထားသည်။
ပြည်တွင်း ရွှေဈေးကွက်အတွင်း အစိုးရထုတ် ရွှေဒင်္ဂါးပြားများမှာ တစ်ကျပ်သားလျှင် ၁၆ ဒသမ ၃၂၉ ဂရမ်ရှိပြီး ရန်ကုန် ရွှေဈေးကွက်ရှိ ဒင်္ဂါးပြားမှာ ၁၆ ဒသမ ၆၀၆ ဂရမ်နှင့် မန္တလေးဈေးကွက်ရှိ ဒင်္ဂါးပြားမှာ တစ်ကျပ်သားလျှင် ၁၆ ဒသမ ၆ ဂရမ်ဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်း အလေးချိန် မတူညီမှုများ ရှိနေသည်။
အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ အသစ်ထပ်မံ ထုတ်လုပ်မည့် ရွှေဂရမ်ပြားများမှာ ၁၀၀ ဂရမ်တစ်ပြားလျှင် ၆ ကျပ်သားဝန်းကျင် ရှိကြောင်း တိတ်စိန် ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးဇော်အောင်က ဆိုသည်။
ရေစိုအ၀တ် ၀တ်လျက်ဖြင့် မီးချောင်းတပ်ဆင်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ဓါတ်လိုက်သေဆုံး
၂.၄.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၀၁၄၅အချိန်တွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့မရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်
များသည် ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ်၊ နတ်စင်လမ်းရှိ မြသီတာငါးဒိုင်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ဓါတ်လိုက်သေဆုံးနေကြောင်းသတင်းအရ သွားရောက် စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ကိုမင်းမင်း(ခ)ကိုလူအေး၊ (၃၀)နှစ်၊
(ဘ)ဦးသိန်းမြင့်၊ (၇၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်နေသူ
ဖြစ်ပြီး ရင်ဘတ်တွင် အပူလောင်ဒဏ်ရာ (၂)ချက်ရရှိထားသည်ကို တွေ့ရှိ
ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းရာ သေဆုံးသူသည် ၀၁၃၀ အချိန်ခန့်က ကြည့်မြင့်တိုင်
မြို့နယ်၊ နတ်စင်လမ်းရှိ မြသီတာ ငါးဒိုင်၌ ရေစိုနေသည့်အ၀တ်အစားကို
၀တ်ဆင်ထားလျက်ဖြင့် လျှပ်စစ်မီးချောင်းတပ်ဆင်ရာမှ ဓါတ်လိုက်ခဲ့၍ ဒဏ်ရာများရရှိကာ သေဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၄)ဖြင့် ရေးဖွင့်ပြီး စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံးမြို့ စင်္ကာပူ ဈေးအပေါဆုံးမြို့မှာ မွမ်ဘိုင်းမြို့
၁(က) နံပါတ်တပ်ကားတွေကို လာမယ့် ဧပြီ ၄ ရက်နေ့ကစ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း ဖျက်သိမ်းခွင့်ရ ကားတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးသွားမယ်လို့ ကုန်းလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (ကညန)က ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။
ဒါအပြင် ၂(က) နံပါတ်တပ် ကားတွေကိုလည်း လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့ကစ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း ဖျက်သိမ်း စီမံချက်အဖြစ် သတ်မှတ်လက်ခံမယ်လို့ ကြေငြာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကားတင်သွင်းခွင့် စနစ်မှာ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအပ်သူတွေကို ပါမစ် တစောင် ထုတ်ပေးပြီး တပတ်ရစ် ကားတစီး တင်သွင်းခွင့် ပေးပါတယ်။ ကျန် ပြည်သူတွေကိုတော့ ကားအသစ်တွေပဲ တင်သွင်းခွင့်ပေးထားပါတယ်။
ဒီအတွက် တပတ်ရစ်ကား တင်သွင်းလိုသူတွေဟာ ယာဉ်ဟောင်းအပ် စလစ်ကို ၀ယ်ယူကြ ရပြီး လက်ရှိ ကျပ် သိန်း ၁၀၀ ကျော် ပေါက်ဈေး ရှိနေကြောင်း စုံစမ်းသိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြသမားတယောက် သေဆုံးပြီး ၄ ယောက် ဒဏ်ရာရတဲ့ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေ ပိုဆိုးသွားမှာကို စိုးရိမ်မှုတွေ မြင့်တက်နေပါတယ်။
ဧပြီ ၁ ရက်နေ့က အဖြစ်အပျက်မှာ ဆန္ဒပြသမားတွေ လူစုနေတဲ့နေရာကို သေနတ်သမားတွေက သေနတ်နဲ့ လှမ်းပစ်ခဲ့ပြီး ကားမောင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
သေနတ်သမားတွေက ကားပေါ်ကနေ သေနတ်တွေ အဆက်မပြတ် ပစ်ခဲ့တယ်လို့ မျက်မြင်တယောက်က ပြောပြပါတယ်။
ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ နီတာသွန် လမ်လူရာက ယင်းလပ်အစိုးရ ပြုတ်ကျသွားတဲ့အထိ ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“မိတ်ဆွေ ..တကယ်လို့ သင်ဟာကျောင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ အတန်း (class) ထဲမှာ အလွယ်တကူ သက် သောင့်သက် သာ နဲ့ ပထမ ခဏခဏ ရနေပါသလား။ ဒါဆိုရင် သင် အတန်း (class) မှားနေပါပြီ။”
စာရေးသူအနေနဲ့ မေးခွန်းအမေးအဖြေ ကဏ္ဍတွေမှာ မကြာ ခဏ မေးမြန်းခြင်းခံရတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ..
“အခုလက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်ဟာ တိုးတက်မှုရှိသင့်သလောက် မရှိဘူး။ ရပိုင်ခွင့် ရှိသင့်သလောက် မရှိဘူးလို့ ခံစားရပါတယ်။ အလုပ်ပြောင်း လုပ်သင့်ပါသလား”
ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့အတွက် စိန်ခေါ်မှုမရှိ သလို အခွင့်အလမ်းလည်း မရှိတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုမှာ ဘယ်လိုမှ ရေရှည်မပျော်ပိုက်နိုင်ပါဘူး။
အလုပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုကို ရလိုသူ တွေအနေနဲ့ မိမိနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်အကိုင် ကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ လစာကောင်းကောင်းရဖို့၊ အခွင့်အရေး၊ ရပိုင်ခွင့်ရဖို့ စတာတွေကို ထည့် သွင်းစဉ်းစားသလို ကောင်းမွန်ပြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် နိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် (Growth Environment) ဖြစ်ဖို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရပါမယ်။
“ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် (Growth Environment) ဆိုတာ ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးလဲ”
သင့်အနေနဲ့ အရာရာလွယ်ကူနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ ဘယ်တော့မှ မနေပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာ သင့်အနေနဲ့ ရေအိုင် ငယ်ထဲက အလတ်စားငါးတစ်ကောင် (A medium sized fish inavery small pond) ဖြစ်နေ နိုင်လို့ပါပဲ။ စိန်ခေါ်မှုသစ်တွေကို အမြဲမပြတ် ရှာဖွေပြီး မိမိရဲ့အလားအလာကို မြှင့်တင်ပါ။
သင့်ရဲ့လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်၊ လက်ရှိအလုပ် အကိုင်ဟာ သင့်အတွက် ...
- မိမိကိုယ်ကို စိန်ခေါ်မှုမရှိဘူးလို့ ခံစားနေရပါသလား။
- မိမိအတွက် ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ် ကောင်းနေပါသလား။
ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကနေ သင့်အနေနဲ့ ပြောင်းလဲဖို့ မဖြစ်မနေ ကြိုးစားရပါမယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဟာ သင့်အတွက် ..
- စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးစားအားထုတ်ဆောင်ရွက်နေရပါသလား။
- စိန်ခေါ်မှုတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် ရှိနေပါသလား။
- မိမိရဲ့သက်သောင့်သက်သာနယ်ပယ် (Comfort Zone)ရဲ့အပြင် ဘက်ကို ရောက်အောင် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးစားနေရပါသလား။
- မနက်မိုးလင်းတိုင်း ရင်ခုန်မှုအပြည့်ဖြင့် နိုးထနေရပါသလား။
- အရှုံးဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘဲ မိတ်ဆွေသဖွယ် ရင်းနှီးနေပါ သလား။
- စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနေပါသလား။
ဒီလို ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဟာ သင့်အတွက် ဖွံ့ ဖြိုးတက်တက်နိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် (Growth Environment) ဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးထွားမှု (Growth) = ပြောင်းလဲမှု (Change)
ဆိုတဲ့ ညီမျှခြင်း (Equation) လေးကို အမြဲတမ်းသတိရပါ။ စာရေးသူ တို့အနေနဲ့ ဘ၀မှာ တစ်ခါတစ်ရံ ကြီးထွားမှု (Growth) မရှိဘဲနဲ့ ပြောင်း လဲနိုင်ပေမဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြီးထွားဖို့ (Growth) ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ မပြောင်း လဲဘဲနဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်မို့ စဉ်ဆက် မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လိုသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါတယ်။
တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်အကိုင်စတာတွေ ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုး စားကြတဲ့နေရာမှာ ကန့်သတ်ဟန့်တားမှုတွေ၊ ပြစ် တင်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်း ကြုံတွေ့ကြရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့သလို ကြုံတွေ့လာ ကြရတဲ့အခါမှာ မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုကို မပျက်ယွင်း မလျော့ပါးပါစေနဲ့။ မိမိဘ၀ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှန်သမျှဟာ မိမိနဲ့ သာသက်ဆိုင်ပြီး မိမိမှာသာ အလုံးစုံ တာဝန် ရှိတယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ။
တစ်ခါတစ်ရံ မိမိကိုယ်ကိုသာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်အောင် ကြိုးစားပြီး မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို မပြောင်းလဲရင် တိုးတက်မှုဟာ ခက်ခဲပြီး နှေးကွေး တတ်ပါတယ်။ အဲ့သလိုပါပဲ မိမိရဲ့ပတ်ဝန်း ကျင်ကိုသာ ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားပြီး မိမိကိုယ်ကို မပြောင်းလဲရင်လည်း တိုးတက်မှုဟာ ခက်ခဲပြီး နှေးကွေးပါလိမ့် မယ်။ မိမိကိုယ်ကို စဉ်ဆက် မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေသလို မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲနိုင်ပါမှ တိုးတက်မှု ဟာ မြန်ဆန်ပြီး အောင်မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- သူလုပ်နေတဲ့ အလုပ်အကိုင်
- သူနေထိုင်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်
- သူပေါင်းသင်းနေတဲ့ အပေါင်းအသင်း
- သူ ဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်တွေ
- သူ နေ့စဉ်အချိန်အကုန်ခံ နေထိုင်သွားလာ ကျက်စားတဲ့နေရာတွေ
- သူတက်ရောက်တဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်၊ အခမ်းအနားတွေ
စတာတွေနဲ့ များစွာ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတာ မို့ ကောင်းမွန်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်နိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် (Growth Environment) တွေကို အသိ ဥာဏ် ရှိစွာ ရွေးချယ်နိုင်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။